Gudoomiyaha Golaha Baarlamaanka dalka Jabuuti oo Muqdisho lagu soo dhaweeyay
Wafdi balaaran oo uu hogaaminaayo Gudomiyaha Baarlamaanka Dalka jabuuti ayaa
Waxaa ay goordhow magaalada Muqdisho soo gaareen , ayagoo ka soo kicitimay dalkaasi Jamhuuriyadda Jabuuti.
Wafdigan ayaa waxaa horkacayay guddoomiyaha baarlamanka Jabuuti iyadoo socdaalka guddoomiyaha ay ku wehliyeen xildhibaano ka tirsan baarlamanka jamhuuriyadda Jabuuti.ee aanu walaalaha nahay
Wafdigaan ayaa waxaa si weyn garoonka diyaaradaha Muqdisho ugu soo dhaweeyay dhigiisa dalka Soomaaliya Prof Jawaari, xildhibaano, saraakiil ka tirsan ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Jabuuti iyo dadweyne kale.
Xiliga ay wafdiga ka soo gaareen garoonka ayaa waxaa shir jaraa’id si wadajir ah ugu qabtay Saxaafadda gudaha iyo Dibadaba guddoomiyaha baarlamanka Jabuuti iyo guddoomiyaha baarlamanka Soomaaliya.
Gudoomiyaha baarlamanka Soomaaliya Prof Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo ugu horey la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in imaashaha Gudoomiyaha Golaha baarlamanka Jabuuti uu yahay mid sii xoojineysa xiriirka Qotodda dheer ee ka dhaxeeya labada dal isagoo carabka ku dhuftay in uu yahay guddoomiyihii ugu horeeyay oo ka socda dalalka afrika ee yimaada Muqdisho.
Gudoomiyaha Golaha baarlamanka dalka Jabuuti Idiris Cali oo la hadlay warbaahinta ayaa isna sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay in uu yimaado magaalada Muqdisho.oo ah caasimadda dalka soomaliya
Wafdiga ka socday dowladda Jabuuti ayaa haatan kulan kula leh Hotelka Siti Balaasa ee magaalada Muqdisho mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyagoo ka wada hadlaya arimo badan oo la xiriira sii horumarinta xiriirka alabadda dale e soomaliya iyo jabuuriyadda Jabuuti.